Markov: Wariyihii Lagu Dilay Dallada Sumeysneyd: Q: 1-Aad. W/Q Abdalle Ahmed Mumin | Caroog News
Markov: Wariyihii Lagu Dilay Dallada Sumeysneyd: Q: 1-Aad. W/Q Abdalle Ahmed Mumin
Waa Qeybtii 1aad taxanaha sheeko ku saabsan qorshe shirqool oo tobannaan sano qaatay oo looga takhalusay wariye rug caddaa ahaa.
Georgi Markov wuxuu ku dhashay caasimadda Sofia ee Boqortooyada Bulgaria 1929-kii. Yaraantiisii ayuu billaabay wax qorista. Dhalinyaranimadiisii wuxuu ku soo baxay qoraa sheekooyinka isagoo sidoo kalana naqshadeynjiray masraxiyadda iyo majaajilada.
Shaqadiisii ugu horreysay waxay ahayd macallinimo wallow uu muddo yar ku shaqeystay injineer maadooyinka kiimikada oo uu jaamacadda ka dhigtay.
Nidaamkii Shuuciyadda ee uu ku hoos noolaa ayaa durba dhibsaday qoraallada maldahan iyo kuwa abbaarta tooska ah ee Markov uu soo bandhigayey waayo badi qoraaladiisa waxay ahaayeen dhaleeceyn ku jiheysan madaxdii Shuuciyadda ee Bulgaria ka talin jiray kuwaasoo xiriir iskaashi kala dhexeeyay Ruushka.
Dowladda ayaa mamnuucday gebi ahaan buuggaagtiisa. Waxaa la xayiray qoraaladiisa in lagu daabaco wargeysyada dalka, masraxiyadiisa caanka ahaana waxaa lagu soo rogay faafreeb.
Sidaasi oo ay tahay dad badan ayaa si hoose u iibsan jiray buugaagtiisa lana dhacsanaa aragtiyahiisa ka hor imaadsan Hanti Wadaagga. Buuggiisa Haweenka Warsaw ‘Women of Warsaw’ ee soo baxay 1968 ayaa loo aqoonsaday mid ka mid buuggaagta qorayaasha da’da yare ee xilligaa ugu wanaagsanaa. Buuggiisa kale ee Saqafka “The Roof” ayey Dowladdu amar dul dhigtay in la joojiyo xilli uu ku jiray daabacaad.
KA HAAJIRIDII DALKIISA
Sannadkii 1969-kii, wariye Markov isagoo dhalinyaro ah ayuu isaga haajiray dalkiisa sababo la xiriira cadaadiska faraha badan ee Dowladdu saartay. Wuxuu markaa tagay dalka Talyaaniga oo walaalkii uu ku noolaa. Markov sannadkii 1971-kii ayuu Safaaradda Bulgaria ee Talyaaniga weydiistay baasaboorkiisa oo ka dhacay in loo cusbooneysiiyo isagoo ujeedkiisu ahaa inuu sugo illaa isbeddel ka dhacayo dalkiisa kaddibna uu dib ugu laabto oo noloshiisa wax qorista dib u bilaabo, hase ahaatee taa ma aysan suuragalin.
Markaa Markov wuxuu goostay inuu tago magaalada London, halkaa oo uu luuqadda English-ka ku bartay, kaddibna wuxuu shaqo ka heley laanta Afka Bulgaria ee idaacadda BBC-da.
Noloshiisii cusbeyd ee London kama reebin inuu qoraalladiisa sii wado, isagoo si ba’an u duri jiray siyaasadaha gurracan ee Hanti Wadaagga iyo kalitalisnimada Bulgaria ka jirtay, taasoo markasta dacarta ku kicin jirtay maamulkii Bulgaria ka talinayey- gaar ahaanna hoggaamiyaha xisbiga Shuuciga Todor Zhivkov .
XUKUN MAQNAANSHO AH
Sannadkii 1972-kii ururka qorayaasha Bulgaria oo uu Markov xubin ka ahaa ayaa ka xayuubiyay xubinnimadiisii ururka qorayaasha, waxaana kiis ka dhan Markov oo Dowladda wadatay la geeyay Maxkamadda Sare ee dalkaasi taasoo xukun xarig 6 sano oo maqnaanshiyo ah ku ridday.
Dowladda ayaa qaadday ol’ole weyn oo si xaq darro ah loogu beegsanayey Markov. Dhammaan dukaamadda buugaagta iyo maktabadaha wax lagu akhriyo ayaa laga mamnuucay iibinta buugaagta Markov.
Saxaafadda gudaha ee Bulgaria oo markaa gacanta ugu jirtay Dowladda-na waxaa laga xarrimay inay xigato ama xusto magaca Markov. Amarkaasi wuxuu socday illaa 1989-kii.
Sirdoonka Bulgaria waxay go’aansadeen inay billaabaan qorsheynta si kasta oo ay ku aamusin karaan ama ku dili karaan Markov…..